आफ्नै जिल्लामा भिम रावलको अस्तित्व संकटमा ! | katipath news
आफ्नै जिल्लामा भिम रावलको अस्तित्व संकटमा !
नेकपा (एमाले)का नेता भीम रावलको गृहजिल्ला अछामको अध्यक्षमा चन्द्र बोहरा निर्वाचित भएका छन्। आफ्ना प्रतिस्पर्धी प्रकाश शाहलाई १ सय २४ मतले पराजित गर्दै बोहरा निर्वाचित भएका हुन्।
बोहरा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकटका हुन्। बोहराले ४ सय ३१ मत प्राप्त गरे भने शाहले ३ सय ७ मत प्राप्त गरे। अध्यक्षबाहेकका अन्य पदाधिकारीमा भने शाह प्यानलका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्। बोहरा ओली र शाहले रावलपक्षमा प्यानल नै बनाएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
उपाध्यक्ष पदमा भीमबहादुर बिष्टलाई पराजित गर्दै बलबहादुर कुँवर विजयी भएका छन्। कुँवरले ३ सय ८६ मत पाउँदा विष्टले ३ सय १३ मत पाएका छन्।
सचिवमा आदर्श साउँदलाई १९५ मतले पछि पार्दै भीम रावल विजयी भएका छन्। रावलले ४ सय ५३ मत पाउँदा साउँदले २ सय ५८ मत पाएका छन्।
प्रेमबहादुर महर र डम्बरबहादुर बिसी विजयी भएका छन्। बिसी २ सय ६० र महर २ सय ५२ मतका साथ विजयी भएका हुन्। नयाँ नेतृत्वका लागि भएको निर्वाचनमा ७४९ जनाले मतदान गरेका थिए। अन्य सदस्य पदको मतगणना राति नै सुरु गर्ने निर्वाचन समितिले जनाएको छ।
एमालेको कञ्चनपुर जिल्ला अध्यक्षमा सुरेन्द्र विष्ट विजयी भएका छन्। कञ्चनपुर सदरमुकाम रहेको भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) समेत रहेका विष्ट अर्का उम्मेदवार वीर बहादुर थापा (पातल)लाई हराएर अध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन्।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भइ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हुँदा थापा कञ्चनपुर अध्यक्ष थिए। सर्वोच्चको फैसलानुसार दुई पार्टीको एकता भंग हुँदा माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमाले रोजेका थापा एमाले कञ्चनपुरकै जिम्मेवारीमा रहेका थिए।
निर्वाचनमार्फत् नेतृत्व चयन हुँदा थापा विष्टसँग ९८ मतले पराजित भए। विष्टले २८१ मत ल्याए भने थापाले १८३ मत ल्याए।
अध्यक्षसहित पदाधिकारीमा विष्टको प्यानल नै विजयी भएको छ। उपाध्यक्षमा विष्ट प्यानलकी लक्ष्मी बुढा २८१ मत ल्याएर विजयी भएकी छन्। थापा प्यानलबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार रहेका महेश पन्तले २०५ मत ल्याए।
सचिवमा पल्लब भट्ट २३३ मतसहित विजयी भए भने पराजित अशोक चन्दले २२६ मत ल्याए। उपसचिवमा कर्ण चन्द ३४७ मत ल्याएर विजयी भए। यस्तै, फैरु तामाङले २९६ मत ल्याएर विजयी भए।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षकै दुई समूहका नेताहरु विष्ट र थापालाई अध्यक्ष विजयी गराउन लागेका थिए।
विष्टका पक्षमा पोलिट्ब्यूरो सदस्य एवम् कंचनपुर इञ्जार्ज निरु पाल, सह–इन्चार्ज नर बहादुर धामी, कृपाराम राना र कमला बोहरासहित पोलिटब्यूरो सदस्य राजेन्द्र रावल थिए।
थापाका पक्षमा पूर्व माओवादी नेता एवम् एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश इञ्चार्ज लेखराज भट्ट, नेता कर्ण थापा, सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष दामोदर भण्डारी थिए।
भट्ट, थापा र भण्डारीले सर्वसम्मतिमै थापालाई अध्यक्ष बनाउने प्रयास गरेका थिए। तर, सहमति जुट्न नसकेपछि दुवै पक्ष प्यानलसहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए।